မျက်သားတွေ နီမြန်း စေတဲ့ အကြောင်းရင်း (၉) ခု - Hello Sayarwon
မျက်စိကျန်းမာရေး » မျက်စိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
Update Date ဇန်နဝါရီ 12, 2021 .3mins read
မျက်လုံးထဲက မျက်သား နီမြန်း တာ ဖြစ်ဖူးပါသလား။ မျက်စိညောင်းတာ၊ မျက်လုံးခြောက်သွေ့တာ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုများတာ၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ရေတိမ် သို့မဟုတ် မျက်ကြည်လွှာပေါက်ပြဲခြင်းတို့ ကြောင့် မျက်စိနီရဲတတ်ပါတယ်။
မျက်စိနာခြင်း၊ မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊ မျက်နက်ဆံရောင်ခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာအနာဖြစ်ခြင်း တို့လို ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နီရဲနေပြီး စိတ်ညစ်စရာ မျက်လုံးအခြေအနေကြောင့် မသက်မသာ ခံရခက်နေမှာပါ။ မျက်စိနီရဲစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့က ဆေးကုသဖို့ လိုနိုင်ပေမယ့် လုံးဝအန္တရာယ်မရှိနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီ ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်းတွေကို အရင်ဖတ် ၊ ကိုယ့်အခြေအနေကို မူတည်ပြီး ဆရာဝန် ပြသင့်မပြသင့် ဆုံးဖြတ်ပေါ့။
ဘာတွေကြောင့် မျက်စိ၊ မျက်သား နီမြန်း လာတတ်လဲ
တစ်ခါတစ်ရံကျရင် မျက်စိနီလာတာ မျက်လုံးညောင်းညာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ကြည့်တဲ့အချိန် များသွား၊ ကြာသွားခဲ့ရင် မျက်စိညောင်းညာခြင်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- ကွန်ပျူတာကို ဆက်တိုက်ကြည့်နေမယ်၊ အလင်းရောင်မလုံလောက်ဘူး ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်မှာ အလင်းပြန်နေတယ်ဆိုရင် မျက်စိနီရဲလာနိုင်ပါတယ်။
မျက်ရည်ဟာ မျက်လုံးအတွင်း ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ အရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တာဝန်ယူထားပြီး ပြင်ပက ဘယ်အမှုန်မှ မျက်လုံးထဲမဝင်အောင် ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မျက်လုံးက မျက်ရည်အလုံအလောက် မထွက်ရှိနိုင်ဘူးဆိုရင် ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် မျက်စိနီရဲတာတင်မကဘဲ ပူစပ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အလင်းရောင်မျက်စိကျိန်းခြင်းနဲ့ အမြင်ဝေဝါးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်(အဲကွန်းကြောင့်) နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု များခြင်း၊ စီးကရက်ငွေ့ရှူရှိုက်ရခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်မှုနဲ့ အအေးမိရောဂါဆေးဝါးတွေကြောင့် မျက်စိ နီနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုများလာရင် အရေပြားနေလောင်တာနဲ့ ဆင်တူတဲ့နာကျင်ရတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုဝေဒနာနဲ့ မျက်စိမှာပူလောင်ခြင်းခံစားရစေပါတယ်။
လက်နှိပ်ဓာတ်မီး အလင်းရောင်လိုမျိုး သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အလင်းရောင်ဒဏ်ထိတွေ့မှုများခြင်းကြောင့်လည်း flash burn လို့ ခေါ်တဲ့ ဝေဒနာဖြစ်စေပြီး နာကျင်မှု၊ အလင်းရောင်မခံနိုင်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ မျက်စိနီရဲပြီး ခိုးလိုးခုလုဖြစ်စေပါတယ်။
မျက်စိနာခြင်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ ကူးစက်လွယ်ဝေဒနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိနာနေပြီဆိုရင် မျက်လုံးနဲ့ မျက်ခွံအတွင်းသားကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ တစ်သျှူးအလွှာပါး ရောင်ရမ်းလာပြီး မျက်စိမှာ ရှတတ ဝေဒနာခံစားရပြီး နီရဲလာပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်မှုန့်၊ ကလိုရင်း တို့လိုအရာတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် အပြင် ဓာတ်မတည့် (ဥပမာ ပန်းဝတ်မှုန်)တွေကြောင့်လည်းမျက်စိနာတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိနာရင်တော့ တခြားလူဆီမကူးစက်တတ်ပါဘူး။
Blepharitis လို့ခေါ်တဲ့ မျက်ခွံတွေ ရောင်ရမ်းပြီး နီရဲလာတဲ့ အခြေအနေဟာ ထပ်ကာတလဲလဲ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာတာရှည်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်လိုဖြစ်ရတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှုမပေးဘဲ အရေပြားထဲမှာ ရှိနေလေ့ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဖြစ်လာတာပါ။
Blepharitis ဖြစ်လာရင် မျက်ခွံမှာ နာကျင်မှု၊ နီရဲခြင်း၊ ကပ်ခြင်း တို့ ခံစားရနိုင်တဲ့အပြင် အလင်းရောင် မခံနိုင်ဘဲ မျက်လုံးထဲမှာ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မျက်နက်ဆံရဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ ကျဉ်းလိုက်ကျယ်လိုက်လုပ်ပေးပြီး မျက်လုံးထဲ ဝင်ရောက်လာမယ့် အလင်းရောင်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ သည်အစိတ်အပိုင်း ရောင်ရမ်းလာတဲ့အခါ မျက်စိနီရဲစေပြီး အလင်းရောင်မခံနိုင်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ် ပြဿနာတွေနဲ့ ရောဂါဝင်ခြင်းတို့ကလည်း မျက်နက်ဆံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
(၇) မျက်မြှေးအောက် သွေးခြည်ဥခြင်း (Subconjunctival Hae-morrhage)
မျက်စိကို ထိခိုက်မိတာ၊ ဒဏ်ဖြစ်စေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ချောင်းဆိုးတာလောက်နဲ့ မျက်လုံးသွေးကြောငယ်ကို ပေါက်သွားစေပြီး မျက်စိနီရဲစေပါတယ်။ သွေးကျဲဆေး သောက်ထားသူတွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ စိုးရိမ်ရတာကလွဲလို့ အများအားဖြင့်တော့ ရက်သီတင်းပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသက်သာနိုင်ပါတယ်။
ရေတိမ်ဖြစ်လာရင် မျက်စိနီရဲပြီး နာကျင်မှုခံစားရတဲ့အပြင် တိမ်စွဲခြင်း၊ အမြင်မှုန်ဝါးခြင်းများ ပြင်းထန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့မျက်စိကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောမကြီးကို ရေတိမ်ကြောင့် ထိခိုက်စေပါတယ်။
မျက်လုံးထဲမှာ အရည်တွေ စုလာပြီး အာရုံကြောမကြီးပေါ် ဖိအားဖြစ်လာစေတာကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ ရေတိမ်က မျက်စိကွယ်နိုင်တာကြောင့် အရေးပေါ် အမြန်ဆုံးကုသဖို့ လိုပါတယ်။
(၉) မျက်ကြည်လွှာ အနာဖြစ်ခြင်း
မျက်ကြည်လွှာမှာ အနာဖြစ်တဲ့အခါ မျက်စိ နီမြန်း လာပြီး အလင်းရောင်မခံနိုင်ဘဲ မျက်လုံးထဲအမှုန်ဝင်သလို ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအနာတွေက ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်တာကြောင့် မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူရမလဲ
နှစ်ရက်ထက်ကျော်ပြီး မျက်စိ နီမြန်း နေရင်
အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်မျက်ချေးတွေ ထွက်ရင်
အမြင်အာရုံ သို့မဟုတ် နာကျင်မှုပြဿနာတွေ ရှိလာရင်
အလင်းရောင်ကို မခံနိုင်ရင် စတဲ့ အချက်တွေ သင့်မျက်လုံးမှာ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
Accessed Mar-11, 2020.
ဆီးလမ်းကြောင်း ကနေတဆင့် ဘက်တီးရီးယား နဲ့ မှိုပိုးတွေ ဝင်ရောက် ကူးစက်တာက များပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက် ကူးစက်မှုကို ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တယ် ခေါ်ပါတယ်။
ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး, ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2021 .2mins read
အမြင်အာရုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်သလဲ။ ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုအပ်မလဲ။
Uncategorized ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2021 .3mins read
ချင်းမှာပါဝင်တဲ့ 6-gingerol လို့ခေါ်တဲ့ bioactive compound တစ်မျိုးဟာ Lupus ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို လျှော့ချပေးရာမှာ အလွန်ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဇန်နဝါရီ 16, 2021 .2mins read
မျက်စိအဆုံး နားအရှုံး ဖြစ်တာကြောင့် မျက်လုံးကို သေချာ ဂရုမစိုက်လို့ အမြင်ကွယ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, မျက်စိကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 4, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 5, 2021 .2mins read